Xawaalada Tawakal oo 13,500 oo doollar ku Taageertay Qaxootiga kasoo Cararaya Yemen – Radio Daljir
Luulyo 6, 2015 12:15 g 0
Isniin, Luuliyo 06, 2015 (Daljir) — Maamulka xawaaladda Tawakal Express oo kamid ah xawaaladaha Soomaalida ayaa lacag dhan $13.500 (Sedex iyo toban kun iyo shan boqol oo dollar) ku wareejiyay guddiga gurmadka Qaxootiga dalka Yemen ee Puntland.
Xawaaladda Tawakal ayaa lacagtan ay ugu tala-gashay qaxootiga usoo marsiisay dadka u baahan Mu’asasadda Minhaaj iyo Culumaa’udiinka Puntland ,waxaana maamulka Tawakal ay ugu tala-galeen lacagtan in wax looga qabto gar-gaarka loo fidinayo qaxootiga ku soo qul-qulaya magaalada Bosaaso.
“Waxaa farxad inoo ah in aan maanta ku caawino Walaalahayaga ka soo qaxay dagaallada ka socda dalka Yemen lacagtan,waana taageero aan ugu gurmanaynno iyaga iyo cid kasta oo dhibaataysan“ ayuu yiri maamule ku xigeenka Tawakal qaybteeda Bosaaso Maxamed Jaamac oo la hadlay wariyayaasha.
“Culumada iyo walaalaha kale ee muxsiniinta ah waan ku amaanaynaa kaalmada ay ilaa iyo hadda u fidiyeen walaalaha Soomaaliyeed ee Yemen inooga yimid “ ayuu mar kale yiri Maxamed Jaamac oo tilmaamay in xawaaladda Tawakal ay ay caawin doonto walaalaha soo qaxay.
Sheekh Daahir Aw Cabdi oo ka mid ah culumaa’udiinka Puntland oo isna Madasha lacagta lagu Wareejinayay ka hadlay ayaa uga mahad-celiyay Xawaalada Tawakal kaalmada ay soo garsiiyeen qaxootiga dhibaataysan ee ku sugan Bosaaso.
Guddoomiyaha guddiga gurmadka qaxootiga Yemen ee Puntland Sheikh Axmed Yuusuf Daad ayaa isna sheegay in la caawiyay boqolaal kamid ah qaxootiga Puntland soo gaaray ,waxaana uu mahad-celiyay maamulka xawaaladda Tawakal.
Ugu dambeyn, maalmo ka hor magaalada Bosaaso waxaa soo gaaray qaxooti 3,000 oo qof kor u dhaafaya, kuwaasoo u badnaa Haween iyo Carruur ka soo Qaxay Dagaallada sokeeye ee ka soconaya dalka Yemen.